Ake siqale uhlelo lonyaka | KusukaLinux | I-ChrisADR | Kusuka kuLinux
UChrisADR | | Ukuhlela
Kuyamangaza ukuthi ukwamukele okuhle kanjani UMario Futhi ukukhuluma iqiniso, yindatshana yokuqala engiyishicilelayo ekhiqiza ukubukwa okungaphezulu kwezinkulungwane eziyi-10, lokhu kubeka uthango oluphakeme ngakulaba abalandelayo futhi ngiyethemba ukuthi angizukuphoxa ngalokhu 🙂 Ngiyabonga kakhulu ngokuthola imibhalo yami kuthakazelisa ngokwanele ukuwabelana ngendlela 🙂
0.2 Ubuchwepheshe buqhubekela phambili ngokushesha
0.3 Izimiso zihlala isikhathi eside
1 Ukwazi izisekelo
1.1 Okuguqukayo nemisebenzi
1.2 Imitapo yolwazi
1.5 Yenza into eyodwa, yenze kahle kakhulu
Lesi yisihloko semfashini, wonke umuntu ufuna ukuluhlela, noma okungenani wonke umuntu ucabanga ukuthi kuyikhono elidingeka ngokwengeziwe, futhi ukukhuluma iqiniso ngithanda ukubhala incwadi ephelele kuhlelo, i-GNU / Linux, ezokuphepha, mhlawumbe kwezinye iphuzu engikwaziyo, funda nje ukubhala izincwadi zamahhala nangefomethi enhle 😛.
Ubuchwepheshe buqhubekela phambili ngokushesha
Lesi ngesinye sezizathu zokuthi kungani ngingakabhalanga incwadi kuze kube manje 😛 ngoba ngifuna ukwenza okuthile okunganqoba umgoqo wesikhathi emkhakheni lapho izinto zingavamile ukuhlala ngaphezu kwezinsuku ezimbalwa ngendlela yamanje. Kungakho kule ndatshana ngifuna ukukutshela okuncane ngemiqondo kunokusebenzisa, ngale ndlela singaphinde sifunde le migqa isikhashana futhi izoqhubeka isebenze.
Izimiso zihlala isikhathi eside
Yize kunezilimi eziningi ezihlelayo namuhla, imiqondo eminingi ibuyela emsukeni ofanayo. Ngalokhu ngisho ukuthi izinto eziningi ezifundwa namuhla bezisebenza isikhathi eside, futhi mhlawumbe zizoqhubeka nokuba njalo, lokhu kungenxa yokuthi uhlelo lwenziwa abantu futhi inqobo nje uma ziqhubeka nokukhula, eminye imiqondo izosala.
Izifundo eziningi sezivele zikhona, ezinye mahhala futhi ezinye azikho, eziveza okuningi kwe-syntax yezilimi eziningi zohlelo ezithandwa kakhulu namuhla. Kepha ngeke sikwenze lokhu lapha 🙂 Ngifuna ukukutshela okuncane ngokuthi wonke umqambi wezinhlelo kufanele acabange ini ngaphambi kokuqala uhlelo ukuze enze umsebenzi ohloniphekile.
Ukufaka ingqondo yonjiniyela ngokuqinisekile kuyinto edingekayo, esevele endatshaneni endala saxoxa ngayo isihloko. Manje sesizongena emiqondweni esivumela ukuthi sibhale ikhodi.
Okuguqukayo kuyizikhala zememori, ake sicabange ngamabhokisi eposi anezakhiwo ezinkulu, enzelwe ukugcina izinhlobo ezithile zezinto, kukhona ezinkulu nezincane, zingaba zodwa noma ngamaqembu. Ukuguquguquka kuyinani owaziyo ukuthi lizosetshenziswa ngokuhamba kwesikhathi, noma ngabe ungazi kahle inani lalo ekuqaleni, uma ulazi futhi wazi ukuthi ngeke lahluka, sibhekene nokuhlala njalo.
Imisebenzi, ngakolunye uhlangothi, isethi yemiyalo. Umyalo yinto eyisisekelo kunazo zonke engenziwa yiprosesa, isizathu sokuba semisebenzini ukuvumela umqambi ukuba aqoqe amaqoqo ama-oda ukuze akwazi ukuwaphinda kulo lonke uhlelo. Ake sibheke isibonelo esilula futhi esinemininingwane.
Lolu uhlelo oluncane olubhalwe ngo-C, sinomsebenzi okuyinhloko, Ukuhluka saludo, nomsebenzi printf lokho kuvela emtatsheni wezincwadi stdio.h. Ake sishintshe isibonelo kancane bese sisihlanganisa ukuze sibone ukuthi kwenzekani.
Singeze umsebenzi omncane obizwa ngokuthi saludar okuthatha njengengxabano ukuguquguquka okubizwa ngokuthi saludo bese uyiprinta. Lokhu akuwushintshi umphumela wokugcina wohlelo kepha kusivumela ukuthi sibonise umthetho omuhle futhi owusizo wokuhlela, uhlelo lwe- ukukhipha. Ake sibone umphumela:
Uhlelo olulula, olugcwele ulwazi nomsebenzi.
Isizathu sokuthi ngidale umsebenzi saludar bekumane ukukhombisa enye yezinqubomgomo ezinkulu kakhulu zokuthuthuka kwesoftware, esesivele siyiqambe ngokuthi: ukukhipha. Njengoba nje sichazile saludar, printf() ichazwe kwenye indawo kuhlelo lwethu lokusebenza (umtapo wezincwadi ojwayelekile we-GNU), le ndawo yaziwa kakhulu ngokuthi umtapo wezincwadi / imodyuli / umtapo wezincwadi. Imitapo yolwazi iyisethi yemisebenzi esivumela ukuthi sengeze ukusebenza ezinhlelweni zethu ngaphandle kokuthi siphinde sishintshe isondo. Kulokhu, ngiyabonga printf Akudingeki sikhathazeke ngayo yonke imiqondo edingekayo ukuze sikwazi ukukhombisa umyalezo esiwufunayo esigungwini.
Imitapo yolwazi ikhona cishe kuzo zonke izilimi ezihlelayo zamanje, ngoba ukuba nezigaba zekhodi ongakhetha kuzo nokusebenzisa kulula kunokudala umsebenzi ngamunye kusukela ekuqaleni.
Cabanga ngohlelo lwemeyili, asidingi ukwazi konke okudingekayo ukuthumela noma ukuthola incwadi, kwenzeka okufanayo ngohlelo, ukukhipha kubalulekile ukwenza ikhodi eqinile nenhle. Le nqubo ikuvumela ukuthi usebenzise amagama Jikelele ukuchaza izinqubo jikelele. Ngamanye amagama, uma senza umsebenzi enviarCarta() sazi ngendlela jikelele ukuthi lowo msebenzi uzoba nesibopho sokuthumela incwadi, kodwa hhayi ukuthi yiziphi izinyathelo ezidingekayo ukwenza lokho. Futhi leli elinye iphuzu lokuthi ukukhipha kuhle kangako, ngoba kuyasivumela ukugoqa inqubo izingxenye.
Indima yethu saludar kuyisibonelo esicacile sokufakwa ngaphakathi, kusivumela ukuthi sibe nebhulokhi evaliwe enemiyalo ethile esingayisebenzisa kanye noma inkulungwane ngaphakathi kohlelo. Lokhu kwenza ikhodi ifundeke kalula futhi kube lula ukulungisa iphutha ngoba uma kuvela iphutha, sazi kahle ukuthi yimiphi imikhawulo yomsebenzi wethu, futhi siyayazi isitatimende ngasinye esikhaleni esincane. Lokhu kusiletha esimisweni esivamile sokuhlela ku-UNIX
Yenza into eyodwa, yenze kahle kakhulu
Umsebenzi omuhle yilowo kuphela Yenza into eyodwa, kepha ikwenza kahle kakhulu. Ake sicabange ngalokhu okwesikhashana ... enviarCarta() kungenzeka yenze izinto eziningi, ezingeke zilunge uma sifuna ukulungisa inqubo, ngenkathi saludar() eyodwa kuphela. Ngokuhamba kwesikhathi, uma kuphakama izinkinga, eyesibili kuzoba lula ukuyilungisa kunaleyo yokuqala. Inketho eyodwa yokugwema le nkinga kungaba ukukhiqiza amazinga ehlukene wokukhishwa kwe- enviarCarta(), lokhu kusho ukuthi ngaphakathi komsebenzi kuzoba nabanye abanjengo verificarSobre() futhi mhlawumbe ngaphakathi kwalona uthanda verificarRemitente(). Ekugcineni lo msebenzi wokugcina (verificarRemitente()) kucaciswe kakhulu kunokuthi nje enviarCarta() futhi ngale ndlela singakwazi ukugoqa izingxenye zekhodi ukuze benze okudingekayo futhi kube yinto eyodwa kuphela ngasikhathi.
Ukuze ufunde ubuciko bohlelo udinga ukuzijwayeza, futhi njengoba manje sengisibheke ngokujwayelekile isifundo, udinga ukuzijwayeza izilimi ezahlukahlukene, noma izinkinga ezahlukahlukene. Kuqala ukuzama ukukhiqiza imisebenzi ethile, bese kukhulisa ubunzima. Njengenjwayelo, uma kuphakama ukungabaza noma iziphakamiso noma ukuphawula, kungisiza kakhulu ukwazi ukuthi yiziphi izici engingaziqinisa. Ngiyabonga kakhulu futhi kwangathi u-2018 angagcwala impumelelo namaphrojekthi amangalisayo. Jabulela
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » Ake siqale uhlelo lonyaka
Ngiyayithanda i-linux njengoba ngishintshe kusuka kuma-windows ngiyabonga uma usuvele uhlela ku-bash no-c wezingcingo zohlelo ngiyabonga
UJuanjo omuhle! Qhubeka njalo - mhlawumbe ngaphambi kokuthi wazi ukuthi uzobe usiza amaphrojekthi wesoftware amahhala futhi avulekile emhlabeni jikelele. ukubingelela
Kuyathakazelisa kakhulu, kepha lapho nami sengizothatha izinyathelo zami zokuqala ezinhlelweni futhi ngihlela ukuthi u-2018 unyaka engifunda kuwo ukuhlela. Cishe kube sengathi unuke umoya we-ehereal wewebhu.
Ngiyabonga ngale ndatshana, ngithemba ukuthi ungasikhanyisela kakhulu ezindabeni zokuphepha kolwazi eziswele kakhulu ezingqondweni zamakhompyutha.
Sawubona Rodrigo, ngoba nakanjani lo 2018 uzogcwala izindatshana ezinhlelweni nasekuphepheni, inqobo nje uma ngithola umsebenzi ongivumela ukuthi ngiwenze 😛 kodwa okwamanje ngingakuqinisekisa ukuthi isigamu sokuqala sonyaka ngizokwazi ukubhala kaningi, okungenani ngize ngiqede izifundo zami hahaha
Ukubingelela nenhlanhla ngenhloso yakho yokufunda ukuhlela kulo nyaka ozayo this
U-Ernesto Guillermo Vitali kusho
Ngiyabonga kakhulu ngokubhala i-athikili ethokozisayo. Unguthisha omuhle kakhulu.
I-athikili ekhuluma ngeMar.io izokweqa ngaphezu kwalokho obusola ngakho. Kuhle kakhulu futhi kubhalwe kahle kakhulu.
Jabulela unyaka omusha!!!
Phendula u-Ernesto Guillermo Vitali
Ngiyabonga kakhulu u-Ernesto, amagama anomusa kakhulu.
Impela kube ngaphezu kwalokho ebengicabanga ukuthi kuzoba khona, futhi lokho kungigqugquzela ukuthi ngiqhubeke nokubhala kangcono futhi kangcono futhi kangcono, futhi impela ngifuna indawo lapho ngenza khona umsebenzi wokufundisa, kungaba yinto ezuzisa kakhulu kimi futhi ngicabanga ukuthi kunganginikeza ithuba lokubhala izihloko eziningi mayelana nohlelo nokuphepha nezinye izinto ilukuluku elihlala liletha engqondweni yami
Sanibonani nonyaka omusha omuhle happy
Umhlaba weTecprog kusho
Okuthunyelwe okuhle kakhulu mngani wami, imikhonzo eminingi evela eLima - ePeru, futhi siyethemba ukuthi izinhlelo zithuthukisa izimpilo zabantu, ngethemba lokuthi uzoqhubeka nokushicilela okufakiwe okuningi, sithi ukuvalelisa, ukwanga.
Phendula ku-Tecprog World
Ngiyabonga kakhulu futhi ngokuqinisekile kuzofika okuthe xaxa, ngithemba ukwenza uchungechunge oluphelele ukulungiselela abafundi ukubambisana kwamaphrojekthi wesoftware wamahhala. Ukubingelela nempumelelo kulo 2018
Okuthunyelwe kuhle kakhulu… ukubingelela okuvela eParaguay… ngithemba ukuthi u-2018 uzoba unyaka ongcono kakhulu kunalowo owedlule… ukuthi yonke imisebenzi yomuntu siqu iphume… nokuthi uqhubeke nokunikela ngolwazi lwakho… Impumelelo !!!
Sawubona Ricardo, ngiyabonga kakhulu ngemikhonzo, ngithemba impela ukuthi ngizoqhubeka nokwabelana, impela kulo nyaka kuzoba khona izindatshana eziningana 😉 eziphumelelayo kulo nyaka ka-2018! Mayelana
Yini imania yesikhulumi saseSpain ukusho umtapo wezincwadi ngokubhekisele ku- «library». Yimitapo yolwazi yamakhodi, hhayi imitapo yolwazi.
hahaha ngiyabonga ngemininingwane uJorge, ngeshwa ePeru siyibiza ngokuthi imitapo yolwazi, kepha futhi namamojula, yize impela umtapo wezincwadi uphumelela kakhulu, ngizobona ukuthi ngingawulungisa yini umbhalo ukuze uwenze ube olunge ngokwengeziwe 🙂 Sanibonani futhi nijabule ngo-2018
Isingeniso esihle kakhulu ezinhlelweni,
Ngiyethemba futhi niqhubeka nenza iminikelo eminingi efana nale.
Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyethemba ukuthi ngingenza uchungechunge oluphelele, imikhonzo kanye nonyaka omusha omuhle!
UDamian Garcia kusho
I-athikili muhle kakhulu, ngifuna ukufaka isandla ngokuthize ngokuxhumana kwami ​​kokuqala nohlelo nokuthi kubaluleke kangakanani ukuluqhuba. Noma ngubani onentshisekelo kusixhumanisi yilokhu okulandelayo http://bit.ly/1HBRCfx
Ngiyethemba uzokuthakazelisa. Sanibonani, ukuqala okuhle konyaka nokuhlela.
Phendula uDamian Garcia
Ngiyabonga kakhulu Damian, bengingakaze ngiyifunde i-athikili noma yini esekhasini, kepha kubukeka kuthakazelisa empeleni. Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana, imikhonzo
UBertin Osborne kusho
Esikhathini sami void main kusetshenzisiwe, yiziphi izinto, yize bekuku-msdos futhi inani lokubuyisa belingenandaba.
Phendula uBertín Osborne
Sawubona Bertín 🙂 ngokuqinisekile i-void main igcinwa, ingasetshenziswa ngokuya ngobunzima bohlelo namuhla, ngendlela efanayo inani lokubuyisa, kepha namuhla kungcono ukuqhubeka nentuthuko nemikhuba emihle ukuze ukwazi ukuba nayo isoftware engafundwa ngabantu abaningi, ngoba lokhu kubalulekile ezindaweni zesoftware yomphakathi. Ukubingelela nokubonga ngokwabelana
Iminikelo yakho mihle kakhulu, ngiyethemba uzoqhubeka, kulo nyaka we-2018 ngifuna ukuqala ukuhlela, usizo luyabonga